» सहयोगापेक्षी बेसाहारा सडक मानवमुक्त बुटवल उपमहानगरका सडकभरी माग्ने बालबालिका, माग्दा नदिए अस्लिल गाली गलौज
सहयोगापेक्षी बेसाहारा सडक मानवमुक्त बुटवल उपमहानगरका सडकभरी माग्ने बालबालिका, माग्दा नदिए अस्लिल गाली गलौज
बुटवल । सडकपेटी र सार्वर्जनिक स्थलहरुमा रहेका सहयोगापेक्षी बृद्धबृद्धा, मनोरोगी, महिला तथा बालबालिकाले सडकमा जीवन बिताउनु नपरोस् भन्ने उद्धेश्यले बुटवल उपमहानगरले २०७६ पुस ५ गते नगरलाई एक औपचारिक कार्यक्रम गरी सहयोगापेक्षी बेसाहारा सडक मानवमुक्त उपमहानगर घोषणा गरिएको थियो । कार्यक्रममा तामझामका साथ बुटवल उपमहानगर भित्र अव कुनै मागेर गुजारा चलाउने, बेसाहारा, अशक्त र अभिभावक बिहिन मानव नभेटिने उदघोष पनि गरिएको थियो । उदघोष गरिएको केहिदिन सम्म् उपमहानगरका हरियो पोषाक लगाएका सुरक्षाकर्मीले बाटोमा माग्दै हिँड्ने, सडकपेटिमा रात बिताउने र अभिभावक बिहिन बालबालिकालाई उद्दार गर्ने र मानवसेवा आश्रम, अनाथ आश्रम र सुधार गृहमा लगेर संरक्षण पनि गर्ने गरेको थियो । तर उपमहानगरको त्यो घोषणा र प्रतिबद्धता धेरै दिन टिक्न सकेन । सहयोगापेक्षी बेसाहारा सडक मानवमुक्त उपमहानगर घोषणा भएको २ वर्ष नबित्दै बुटवलका हरेक सडकमा मागेर खाने, सडक पेटीमा रातबिताउने र सडकबालबालिका भेट्न सकिन्छ ।
बुटवलको ट्राफिक चोकमा जव रात्री बजार शुरु हुन्छ तव बुटवलको आधुनिकतालाई नै धज्जी उडाउने गरि सडक बालकालिकाहरु रात्री बजारमा आउने ग्राहकको खुट्टा समातेर माग्न थाल्दछन् । ट्राफिक चोक, राजमार्ग चौराहा, बसपार्क आसपासमा माग्नकै लागि बालबालिकाहरुको ठुलो जमघट हुने गरेको छ । तोकेर पैसा माग्ने र नदिए सुन्नै नसकिने फोहोर गाली गर्ने बालबालिकाको ठुलो जमात बुटवलको मुख्य बजार ट्राफिक चोकमा दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।
आदर्शनगरमा डेरा गरि बस्ने बसन्त थापा सन्ध्याकालिन ट्राफिक चोकको बजारमा कोल्ड कफि पिउन आएका थिए । आएर कुर्चीमा बस्न नपाउँदै ३ जना सडक बालबालिकाले उनलाई घेरे र भने ‘दाई १० रुपैयाँ दिनुस् ।’ एकजना होईन ३ जना सानासाना बालबालिकाले घेरेर १० रुपैयाँ तोकेरै उनीसंग मागिरहेका थिए । जव उनले तीनै जनालाई ५-५ रुपैयाँ दिए, उनीहरुले लिन मानेनन् । १० रुपैयाँ नै चाहिने जिद्दी गरिरहे । बसन्तले रिसाउँदै दिन ईन्कार मात्र के गरेका थिए । बालबालिकाको मुखबाट तथानाम फोहोर अस्लील गालिगलौज शुरु भयो । ‘कुटौं आफ्नै बेईज्जत हुने डर, नकुटौं अपशब्द सहितको गालि ।’ उनी कफि नै नपिएर त्यहाँबाट हिँडे । थापालाई जस्तै सुख्खानगरका रमेश शर्माले पनि ट्राफिक चौकको नियती नजिकबाट भोगेर फर्केको बताउँछन् । साँझका बेलामा फष्टफुड पनि खाउँ, साथीसङ्गी पनि भेटौं भन्दै ट्राफिक चोक पुगेका शर्माले एसबिआई बैंकको एटीएमबाट पैसा झिकेर निस्कँदै थिए । माग्ने बालबालिकाले घेरिहाले । ‘दाई १० रुपैयाँ दिनुस् ।’ शर्मासँग पनि ती बालबालिकाहरु ताकेरै पैसा माग्दै थिए । रमेशले पैसा दिन मानेनन् । खुद्रा पैसा छैन भन्दै उनी जव अगाडि बढ्न खोजे ती बालबालिकाहरुले शर्मालाई पनि तथानाम गाली गरिरहे ।
दिपनगरका प्रकाश थापाले भने ४ जना बालबालिकालाई कोल्ड कफि खुवाईरहेका थिए । ४ जनालाई कफि दिन कफि पसलेलाई अर्डर मात्र उनले के गरेका थिए, थप ३ जना बालबालिका कफि पिउन तम्तयार भए । उनले तीनलाई पनि कफि खुवाए । कफिको कप लिँदै दाँत देखाएर हाँस्दै बालबालिकाहरु रमाईरहेका थिए । ‘बिचराहरु हात समातेर माग्न आए, मन थाम्न सकिने एक एक गिलास कफि खुवाएर पठाएँ ।’ शर्माले बने ।
ट्राफिक चोकमा एबीआई सहित २-३ वटा एटीएम छन् । साँझपख एटीएममा जो कोही पैसा झिक्न पसेपनि बालबालिकाहरु पैसा झिक्ने व्यक्तिको पछि लागि हाल्दछन् । दिनहुँ ट्राफिक चोक घुम्न जाने स्थानीयबासीलाई मागेर खाने बालबालिकाहरु बानी परिसकेको भएपनि बुटवलमा नयाँ आउने ब्यक्तिहरुमा भने बुटवलको पहिचान माग्ने बालबालिकाको शहरकाे असलीरुप चिनाउन ती बालबालिका काफी छ ।
सडकमा माग्ने ती बालबालिका यती चलाख छन् की, उनीहरुले मिडीयालाई अनुहार देखाउन तयार हुँदैनन् । स्थानीयबासीले बुटवलको बदनाम भएको गुनासो गरेपछि उनीहरुसँग कराकानी गर्न पुगेको खबरकुरा टिमसँग कुरा गर्नु त परैको कुरा फोटो खिच्न पनि मानेनन् । फोटो खिच्न क्यामेरा अगाडि देखिनासाथ उनीहरुले मुख छोप्छन् वा त्यहाँबाट कुलेलम् ठोक्छन् । सडकमा माग्न आउने बालबालिका दुब्ला पातला छैनन् । कपडा मैलो धैलो पनि छैन, तर उनीहरु सडकमा हिँड्ने जो कोहीलाई पनि खुट्टा समात्ने र माग्ने गरेको भेटिन्छन् । बालबालिका प्रयोग गरेर माग्ने उद्योग संचालन गरेका हिन्दी फिल्मका दृष्यहरुजस्तै चोकहरुका दृष्यले बुटवलमा पनि माग्ने उद्योग त संचालनमा छैन ? भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
बुटवलका पुराना पत्रकार दामोदर खनाल ट्राफिक चोकका नियमित कफि उपभोक्ता हुन् । बिहानै मर्निङवाक गरेर कफि खान ट्राफिक चोक पुग्दा देखिने दृष्यले खनालको मन चिमोट्ने गरेको छ । बुटवलमा तामझामका साथ गरिएको सहयोगापेक्षी बेसाहारा सडक मानवमुक्त उपमहानगर घोषणा कार्यक्रम असफल भएको खनालले महशुस गर्छन् ।
फोटो खिच्न क्यामेरा अगाडि देखिनासाथ उनीहरुले मुख छोप्छन् वा त्यहाँबाट कुलेलम् ठोक्छन् । सडकमा माग्न आउने बालबालिका दुब्ला पातला छैनन् । कपडा मैलो धैलो पनि छैन, तर उनीहरु सडकमा हिँड्ने जो कोहीलाई पनि खुट्टा समात्ने र माग्ने गरेको भेटिन्छन् । बालबालिका प्रयोग गरेर माग्ने उद्योग संचालन गरेका हिन्दी फिल्मका दृष्यहरुजस्तै चोकहरुका दृष्यले बुटवलमा पनि माग्ने उद्योग त संचालनमा छैन ? भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
बुटवललाई सहयोगापेक्षी बेसाहारा सडक मानवमुक्त उपमहानगर घोषणा गर्दा ठुलै उपलब्धी हात लागेको दाबी गर्ने बुटवल उपमहानगरका नगर प्रमुख शिवराज सुबेदी भने बेसहारा नागरिक र सडक बालबालिका सम्बन्धमा सामाजिक संस्थासँग उपमहानगरले सम्झौता गरेको र बुटवललाई सहयोगापेक्षी बेसाहारा सडक मानवमुक्त उपमहानगर बनाउन त्यस्ता संस्थाहरुलाई निरन्तर बजेट उपलब्ध गराईरहेको बताउँछन् । नगर प्रमुख सुबेदीको भनाईबाट त्यस्ता संस्थाहरुले उपमहानगरबाट सोही सिर्सकमा रकम लिएपनि सम्झौता अनुसार काम नगरेको पुष्टि हुन्छ । मानवसेवा आश्रम सहित २ वटा संस्थासँग सहयोगापेक्षी बेसाहारा सडक मानवलाई उद्दार गर्ने र आश्रय दिने विषयमा सम्झौता भएको सुबेदीले बताए ।
बुटवल उपमानगरमा सूचीकृत भएका मात्र १० बढी संस्थाहरु बालकालिका र साहारा बिहिन नागरिकका लागि बुटवलमा क्रियाशिल छन् । बुटवल २ मा एक बृद्दाश्रम, वार्डनम्बर ८ मा मानव सेवा आश्रम, वार्डनम्बर ११ मा अनाथ र नेत्रहिनको आश्रम तथा मंगलापुरमा बालबालिकाको पुनस्र्थाना केन्द्रमा बुटवल उपमहानगर क्षेत्रबाट उद्दार गरिएका मानीसहरुलाई राख्ने गरिएको छ । सिवीन नामक संस्थामा दिघैकालिन आश्रय आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई आश्रय दिने गरिएको बुटवल उपमहानगर सामाजीक महाशाखाकी प्रमुख तुलसा अर्याल बताउँछिन् । उनले बुटवलको सडकमा अनाथ र असहाय नभई अभिभावकहरु स्वयंले बालबालिकालाई माग्ने पेशामा लगाएको आशंका गर्दै त्यसको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताईन् ।
बुटवलका विद्यार्थीको चित्रकला चीनमा प्रदर्शन हुँदै – ‘संसारमा नेपाल चिनाउने सोंच’का पाँच चित्र छनौट
बुटवल उपमहानगरमा ललितकला विषय पढाउने तयारी
चिकेन आईटमको सबै परिकार एउटै छानामुनी, बुटवलमा खुल्यो चिकन च्वाईस
बुटवलमा बुलेटको मेटिअर लन्च